Ọrụ maka Schoolslọ Akwụkwọ | Onyinye Regwọ Ọrụ - Lovehụnanya, Mmekọahụ na Intanet
Home Ọrụ maka Ụlọ Akwụkwọ
Dị ka ịsụ ụzọ na mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta agụmakwụkwọ, anyị na-enye ọrụ dị mma maka ụlọ akwụkwọ. Anyị na-eji ihe ngosi kachasị ọhụrụ banyere ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-emetụta ụmụaka na ndị na-eto eto iji kesaa nkuzi mmekọrịta maka ụmụ akwụkwọ site na 11 ruo 18 afọ dịka akụkụ nke usoro ọmụmụ PSHE / SRE. Anyị na-enye ụmụ akwụkwọ ihe kwesịrị ekwesị maka afọ iji nyere ha aka ịnyagharị gburugburu ebe nrụọrụ weebụ taa. Site na ịmara ahụike, iwu na mmekọrịta metụtara ị bụbiga agụụ mmekọahụ na ịntanetị, ha nwere ike izere ịdaba na ya ma ọ bụ chọọ enyemaka ma ọ bụrụ na ha emee. Anyị na-enyekwa ndị nne na nna ike ka ha na ụmụ ha wee nwee mkparịta ụka a n'ụlọ na isiokwu a siri ike nghọta. Ajụjụ ọnụ nke anyị nke edere na ndị ọkachamara ahụike na ndị ọka iwu na ndị ọrụ na-agbake na-eme ka ihe ọmụmụ ahụ bụrụ eziokwu. Anyị na-egosi ngwa ọrụ na nkwado maka ndị nne na nna na ndị nkuzi. Ihe ndi a dikwa nma maka ulo akwukwo ndi okwukwe.
"Mary gwara ụmụ anyị okwu mara mma n'okwu banyere ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ: ọ ziri ezi, ọ na-ekwu okwu n'echeghị echiche ma na-enye ihe mmụta dị ukwuu, na-enyere aka ịkwadebe ụmụ akwụkwọ anyị ihe ọmụma ha chọrọ iji wee họrọ nhọrọ nke ndụ ha."
Stefan J. Hargreaves, Master in Charge of Seminar, blọ akwụkwọ Tonbridge, Tonbridge
"Ekwenyere m na ụmụ akwụkwọ anyị ga-enwe ebe nchekwa ebe ha nwere ike ịkọwa ọtụtụ nsogbu metụtara mmekọahụ, mmekọrịta na nnweta nke foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'Internet."
Liz Langley, Isi nke Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Onwe na Social, Dollar Academy
Ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'Internet nwere ike inwe ọtụtụ mmetụta na ahụike, omume na inweta ụmụaka taa. May nwekwara ike mara na iwu UK gbasara nyocha afọ na Digital Economy Act 2017 a na-atụ anya na ọ ga-abanye n'ike na njedebe nke 2019. Gọọmentị ekwuputabeghị ụbọchị ọ ga-abụ. Nsonaazụ a ga - eme ka o sikwuoro ụmụaka ike inweta ihe a. Ndị ọkachamara na-echegbu onwe ha na maka ụmụaka ụfọdụ ndị bụrụlarịị ndị ọrụ dị arọ enwere ike ịnwe ụfọdụ nsogbu ahụike ọgụgụ isi. Ọ bụrụ n ’ị chere na nsogbu a dị na ụlọ akwụkwọ gị, ikekwe anyị nwere ike inyere gị aka.
Anyị bụ nwoke na nwanyị na mmekọrịta mmekọrịta agụmakwụkwọ na-eji nyocha ọhụụ ọhụụ na nyocha sayensị mmekọrịta yana ụkpụrụ nkuzi. Collegelọ akwụkwọ Royal nke General Practitioners kwadoro ebe obibi anyị maka ndị ọkachamara. Anyị na-ewepụta oge afọ niile n'ihe egwu nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ maka ụmụ akwụkwọ site na 12 ruo 18 afọ dịka akụkụ nke usoro ọmụmụ PSHE ma ọ bụ nke ụmụ amaala. Ihe anyi choro bu inye ndi umu akwukwo aka ka ha nyere ha aka iji uche ha mara echiche ha. Anyị na-enyekwa ndị nne na nna ike ka ha na ụmụ ha na-emekọrịta ihe nke ọma n'ụlọ ma na-edebanye aha bara uru. BBC TV na Redio na ndị nta akụkọ mba na-akpọkarị anyị ka anyị kwuo okwu n'okwu a.
Onyinye wardgwọ offersgwọ na-enye ọtụtụ nkuzi na okwu. Enweghị foto ndị gba ọtọ. A na-ahazi mkparịta ụka ndị ahụ iji dabara afọ otu. Biko lee nkọwa dị n'okpuru. Nkwupụta nke atụmatụ nkuzi maka ndị nkuzi ga-ekwuputa na izu ndị na-abịa.
Ndị na-enye ihe
Ndị na-eweta ọrụ anyị maka ụlọ akwụkwọ bụ Mary Mary Sharpe, Advocate, Dr. Darryl Mead na Oriakụ Suzi Brown. Nwanyị Sharpe nwere nzụlite na akparamaagwa ma na-eme iwu dịka onye otu Faculty of Advocates na Scotland na Brussels. Ọ nọrọ afọ asatọ dị ka onye nkuzi gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Cambridge na-eme ihe ọmụmụ ihe akaebe na-akwado arụmọrụ kacha elu. Dr. Mead bụ ọkachamara na teknụzụ ihe ọmụma ma zụọ ya dịka otu n'ime ndị mmeri nke Gọọmenti Scottish. Ruo 2015, ọ bụ onye osote onye isi nke National Library of Scotland. Ọ bụkwa onye nkụzi a zụrụ azụ. Suzi Brown bụ onye nkuzi nwere afọ asaa izi ihe PSHE na ụlọ akwụkwọ bekee ma bụrụkwa onye enyemaka Housemistress na Bishop's Stortford College, Hertfordshire maka afọ 7. Anyị bụ ndị otu atụmatụ gọọmentị Scottish maka Ikpuchido Otu Dị Iche Iche ma mechaa ọzụzụ ọzụzụ ụmụaka.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịtụle ọrụ anyị maka ụlọ akwụkwọ gị, biko kpọtụrụ Mary Sharpe, na mary@rewardfoundation.org ma ọ bụ site na ekwentị na 07717 437 727.
Anyị na-arụ ọrụ ma otu nwoke na nwanyị nwere otu nwoke na nwanyị. Akụrụngwa dị iche iche-enyi na enyi. Okwu niile na nkuzi niile nwere ike ịbụ 40-60 nkeji oge iji kwado oge gị ịhapụ oge maka ajụjụ.
Okwu Mmalite na Mmetụta nke Intanet onntanetị na:
ihe egwu nye ahu na uche; mmuta akwukwo, mmebi iwu, mmekorita
vidio a gbara ajụjụ ọnụ na ndị na-eto eto porn riri ike ndị gbakechara
otu esi arụ nzụlite na ebe ị ga-enweta enyemaka
Mmekọahụ na Media:
mara ihe na-akpali mgbasa ozi, ihe nkiri na ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ
mara ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-eri
Ghọta ihe niile bara uru - uru mmadụ bara karịrị ihe ọ bụla
ghọta ihe gbasara mmekọahụ n'ihi na ndị mmadụ dị mkpa
Mmekọahụ na njirimara:
chọpụta ihe ọ pụtara ịbụ inwe mmekọahụ (gụnyere ozi gbasara mmepe nwoke na nwanyị)
mara ma ghota uzo di iche iche eji eme ihe
ghọta onye ọ bụla pụrụ iche na pụrụ iche
ghọta na mmekọahụ na akara ngosi mmekọahụ ma ọ bụ omume adịghị akọwa anyị
Mmekọahụ na nkwenye - Nnwere onwe ịhọrọ:
mara iwu gbasara nkwenye nwoke na nwanyị
dokwuo anya otú nkwenye si arụ ọrụ na mmekọrịta
mara na onye ọ bụla nwere nhọrọ na olu ya na otu esi eji ndị a
Ghọta na onye ọ bụla bara uru
ghọta na ezi mmekọrịta na-akwalite nkwukọrịta okwu na nkwanye ugwu
Okwu nne na nna:
otú ụlọ ọrụ na-akpali agụụ mmekọahụ si gbanwee na mmetụta ya na ọgbọ a
tozọ isi agwa ụmụ gị okwu
mmetụta nke iji ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na-eme ihe ike, nweta, mmekọrịta na mpụ
azum, na imekọ ihe ọnụ na ụlọ akwụkwọ, iji nyere ụmụaka aka ịmaliteghachi iguzogide nsogbu ndị metụtara ịntanetị
ỤLỌ: Maka okwu £ 500 gbakwunyere mmefu njem.
Ọrụ Ndị Ọzọ Maka Schoolslọ Akwụkwọ
S2 na S4: Mmekọahụ: nsogbu ahụike na iwu
Otu ụbụrụ nwa na-amụ ihe
Ihe kpatara ụbụrụ nwa na-enweghị ike ị toụbiga mmanya ókè
Usoro ikpe gbasara iwu gbasara ndị nọ n'afọ iri na ụma na-ebo ebubo mmejọ mmekọahụ
Ajụjụ ọnụ vidiyo ndị na-eto eto porn riri ahụ gbakechara
Otu esi eme ka mmadụ nwee ume na ebe ị ga-enweta enyemaka
S5 / 6: Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na ikpe
Mmetụta dị na nnweta na arụpụtaghị ihe
Ihe ize ndụ nke ị addictionụ ọgwụ ọjọọ na mmekọahụ
N'ịkọwa mmetụta nke ụlọ ọrụ ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ dị ka akụkụ nke 'akụnụba elebara anya'
24-Oge Awa Digital Detox na 2 sessions c.7 ụbọchị iche: Ihe mmega ahụ na-ekpuchi ojiji ịntanetị niile
Nkebi nke mbụ gụnyere mkparịta ụka izizi gbasara nyocha na "atụmatụ ime mmụọ", na afọ ojuju na njide onwe onye ozugbo; Atụmatụ na ịme detox
Nkebi nke 2, nkọwapụta banyere ihe ha nwetara site na ịnwale awa 24 a n'oge izu ụka
Hụ akụkọ gbasara detoxes dijitalụ na ngwa ngwa S4 na S6 ụmụ akwụkwọ nọ n'ụlọ akwụkwọ Edinburgh.
Schoolslọ akwụkwọ Primary
Ima banyere ihe ojoo di na Intanet (P7 naanị):
My Plastic Brain: ghọta ọrụ nke ochie na ụbụrụ ọhụrụ (chọrọ na iche echiche)
Ghọta otu ụbụrụ si emeghachi omume na gburugburu ebe obibi ma mụta omume
Ghọta etu eserese gbasara ịntanetị nwere ike isi gbanwee echiche m; ihe m ga-eme ma ọ bụrụ na m ahụ vidio na ihe osise na-akpasu m iwe
Akụkụ 1 gụnyere mkparịta ụka mbụ banyere otu ịntanetị nwere ike isi kwụsị anyị ịchọrọ ijikọ na ndị ọzọ ma napụ anyị ụra anyị; Atụmatụ na ịme detox
Akụkụ nke abụọ gbasara mkparịta ụka ha nwetara n'oge elekere iri abụọ na anọ a n'izu na-abata
Nkwado maka ndị nne na nna
Gwa ndị nne na nna banyere ihe akaebe kachasị ọhụrụ banyere nsogbu na usoro maka ịnagide nsogbu. Nke a na - enyere aka gbariji maka mkparịta ụka n’ụlọ
Atụmatụ, na nkwado nke ụlọ akwụkwọ, iji nyere ụmụaka aka ịmaliteghachi iguzogide nsogbu ndị metụtara ịntanetị
Biko kọntaktị anyị maka ederede ederede n'efu. Onyinye wardgwọ Ọrụ nwere ike ịnye nkuzi nkuzi ahaziri iche iji gboo mkpa gị.
Ahịa bụ VAT n'efu ma gụnye njem niile n'etiti eriri dị na Scotland na ihe.